Arisialy fanandevo - fototra afrikhepri
Fifandraisana SOKAJY fanandevozana
Ny tantara manala baraka an'i Sarah Baartman
Saartjie Baartman, nomena anarana hoe Hottentot Venus, dia voalaza fa teraka tamin'ny 1789 tao Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao eo amin'ny vahoaka Khoisan, izay tranainy indrindra any amin'ny faritra atsimon'i Afrika. Izy ...
Celia A, ilay andevo izay tsy nanana zon'olombelona sy ara-dalàna hiteny hoe tsia
Ny tantaran'i Celia a rehefa nitahiry ny arsiva dia nanomboka tamin'ny voina manokana tamin'ny 1850, Robert Newson dia tompon'ny tantsaha 60 taona miroborobo amin'ny alalàn'ny ...
Bussa, Barbadiana izay nitarika fikomiana andevo lehibe indrindra eran-tany tamin'ny 1816
Bussa dia Barbadian iray izay nitarika ny fikomiana andevo lehibe indrindra tamin'ny 1816 fantatra amin'ny fikomiana Bussa. Bussa dia teraka tany Afrika Andrefana, ary ...
Rosa Parks, ilay vehivavy tsy sahy niteny tamin'ny fanavakavahana ara-poko
Rosa Parks dia Afrikana Amerikanina mpiaro ny zon'ny olon-tsotra, izay nantsoin'ny Kongresy Amerikana ho vehivavy voalohany amin'ny zon'ny sivily ary ny renin'ny hetsika fahafahana…
Cuffy, ilay andevo nandamina fikomiana andevo 3000 tany Guyana
Kofi na Cuffy dia Akan (fokon'i Ghana) izay voasambotra ary nentina tany Guyana. Nanjary nalaza izy noho ny fikomian'ny andevo 3000 mahery izay ...
Revolisiona Haitian sy ny fahaterahan'i Repoblika Ayiti tamin'ny 1 Janoary 1804
Ny revolisiona Haitian dia nanomboka tamin'ny lanonana hazo caiman nokarakarain'ny hougan Dutty Boukman, notarihin'i Cécile Fatiman. Ity fihetsika voalohany amin'ny revolisiona andevo ity dia ...
Avy amin'ny 1641 ka 1652, 300 000 Irish dia nivarotra ho andevo ny Anglisy
Tonga andevo izy ireo. Ny entan'ny olona marobe mitondra sambo britanika lehibe mankany Amerika. Nalefa an'hetsiny izy ireo ary nahitana lehilahy, ...
Paul Bogle, ilay mpanompo izay lasa maherifim-pirenena Jamaikana
Paul Bogle dia maherifon'ny firenena Jamaikana. Teraka talohan'ny fanafoanana ny fanandevozana izy, teo anelanelan'ny 1815 sy 1820. Nandritra ny fahatanorany dia nofoanana ny fanandevozana tany Jamaika, fa ny ...
Ny fehezan-dalàna mainty tamin'ny mars 1685
Ny lohateny hoe "kaody mainty" dia nomena ny didim-panjakana na ny didim-panjakana tamin'ny martsa 1685 izay niantraika tamin'ny polisy tao amin'ny nosy amerikanina frantsay tamin'ny fanontana Saugrain ...
Olaudah Equiano, andevo nizeriana nanjary olona ambony tamin'ny fanafoanana
Teraka tamin'ny 1745 tao Nigeria ankehitriny, i Olaudah Equiano dia nesorina tao an-tanànany ary namidy ho andevo. Niaritra ny zava-mahatsiravina niampita teo ambony sambo…
Women of Nder: fanoherana ny fanandevozana any Senegaly
Zava-misy io tranga iray mampalahelo io izay efa ela no nahatsiarovana ny Senegaly. Ny tantaran'ny vehivavy Nder izay tamin'ny Talata tamin'ny Novambra 1819, dia nanao sorona iombonana tamin'ny ...
Christiane Taubira dia mitady karama ho an'ny departemantan'i Frantsa any ivelany, ireo voalohany iharan'ny fanandevozana
Mpahay toekarena, foko ara-poko, Tale Jeneralin'ny Confederation any Karaiba ary mpikambana ao amin'ny Parlemanta, Christiane Taubira dia nanolotra tamin'ny taona 1999 fa ny fanandevozana sy ny fanondranana olona an-tsokosoko dia mendrika ho heloka bevava amin'ny zanak'olombelona. Manamarika ity fangatahana ity ...
Ny fehin'ny fanandevozana: izay mbola tsy nolazaina anao akory
David Duke dia nanonona ireo mpahay tantara jiosy izay nanaporofo ny anjara asan'ny Jiosy tamin'ny fanandevozana tany Andrefana hatramin'ny vanim-potoana Romana farafaharatsiny ary mamaritra ny sivana amin'ny haino aman-jery momba ...